I-Fix-A-Flat for Tires: Miracle okanye Nightmare?
I-Fix-A-Flat ithengiswa njengento elinganayo neloyiko elincinci elincinci, i-aerosol ingaba nezinto eziyimfihlakalo ezingayi kukhanda kuphela umhadi kwindawo yakho ngasekupheleni komgwaqo kodwa zenzele! Kodwa ngaba kuhle ngokwenene njengoko kubangelwa ukuba?
Ndiyathetha ngokungathandabuzekiyo, kodwa ndiya kuvuma ukuba (i-limited) isebenzisa.
Ngokuxhomekeke kwiminyaka ye-can, i-Fix-A-Flat ingaba:
Ezinokutsha / ukuhlaselwa.
Enye inhlanganisela yazo zonke ezi ngasentla.
Amagodala amadala e-Fix-A-Flat aqukethe okanye i-propane okanye i-butane njengophethiweyo kunye nefayili yokugcwalisa umtya, okona nje ngenye yeembono ezibuhlungu kakhulu endingazivelayo, njengoko izinto zombini zivutha kwaye zixhaphaza. Ngandlela-thile i ngcamango yokuba amathayi afudumele xa eqhutywe, okanye ukuphazamisa ivili kungenzeka kwiindawo zentengiso apho kungabikho iintlanzi nezangatye ezibonakalayo kubantu abenza izinto. Oku kwakhokelela kwiinkcukacha ezininzi zokuqhuma amathayi, okanye amatshini ahlambulukileyo okanye aphehliweyo ashiywe kwiimoto ezitshisayo ziqhuma kwiitraki kwaye ziwonakalisa konke kwindawo.
Nangona ipropane okanye i-butane ayisayi kuba yingxaki, umcimbi wokuhlawulela uhleli. Ekuqaleni, i-propellant yayiyi-hydrofluorocarbon ebizwa ngokuba yi-HFC-134a, engenakutsha, kodwa eyona gesi enkulu yerhasi. Ukunika ingcamango yendlela ebalulekileyo ngayo: Ukusetyenziswa kwanoma yiphina iikhemikhali ekufakeni ukufudumala kwehlabathi kuthiwa yiNgqungquthela yokuHluma kweMhlaba.
I-carbon dioxide ikwazi ukufudumala kwi-Global Warming (GWP) ye-1, umgangatho apho yonke i-GWP ilinganiswa. I-HFC-134a ineGWP ye-1,300. Ngoku i-propellant esebenzisa ibizwa ngokuba yi-hydrofluoroolefin (HFO), kwaye ine-GWP ye-6.
Nangona kunjalo, oko akusombululi zonke iingxaki. Indlela le nto isebenza ngayo kukuba i-propellant i-polymer.
Xa loo polisi idibene kunye nesisombululo se-asidi kwaye idityaniswe ne-oksijeni, i-reaction reaction (catalytic reaction reaction) eyenzekayo iguqulela i-polymer ibe yi-epoxy, evala izimbobo ezincinci. Ngelishwa, i-liquid result, i-acidic ekhulayo, ihlala isesidini sakho, kwaye kufuneka ihlanjululwe ukuba ivili ayinakonakaliswa ngakumbi yi-asidi, ungakhankanyi ukuba i-liquid ayikwazi ukulinganisela. Kwakhona umsila ococekileyo, onobuthi, onobungozi ukuhlambulula. Ngaba wakha wazama ukukhupha ivili? Uninzi lweevenkile zokutya luya kukwenqaba nje ukwenza konke. Abanye baya kukhangela ngaphezulu ukukwenza.
Kwakhona, i-Fix-A-Flat izokulungisa kuphela izimbobo zeetonki. Umonakalo omkhulu, i- wheel bending , i-cracks okanye i-side-side imiba ayinakulungiswa kunye ne-epoxy. Oku kubaluleke kakhulu xa i-automaker esebenzisa iinqwelo ze-runflat igqiba ukuba awuyidingi into yokuba u-Fix-A-Flat uza kwenza. Ngeke, kungekhona kuwo onke amathuba. Ukuba i-sidewall ibonakaliswe, ungekho inhlanhla. Ukuba ivili liba neentente ngokwaneleyo ukuba lingalahleki kunye neloyi, okanye ukuba i-cracks yenziwe yintsimbi ngenxa yempembelelo, ungekho inhlanhla.
Ukuba ufanele usebenzise i-Fix-A-Flat, xa uthabatha itayiti ekulungiseni, nceda ungakulibali ukuxelela abantu abakhathele ukuba uyifake emotweni wakho!
Musa ukuzenza ukuba zibalwe xa zivula i-valve ukuze idibanise itayiti yakho kwaye inetyhefu, i-acidic liquide iphuma indiza! Siyayithiya xa oko kwenzeka
Ukuphononongwa: Michelin Pilot Alpin PA4
Ukuphononongwa kweMicrosoft X-Ice Xi2
Ukuhlaziywa kweBridgestone Ecopia EP422
Indlela yokuququzelela ukuFunda nokuCinga okuPhambili
I-advecca Nazarene University
Imibuzo yoVavanyo yoTshintsho lokuBuquka
I-Top 9 Times Superman Beat Beatman
Iimpawu zeenkwenkwezi zeNkanyezi ze-Skygazing